स्वास्थ्य Archives - Everest Media News
पहिलो नेपाल आइडल बन्न सफल गायक बुद्ध लामा अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनलाई मंगलबार बिहान ९ बजे काठमाडौंको थापाथल...
यदि तपाइको दिउँसो सुत्ने बानि छ सावधान हुनुहोस् ।राती सुतेको छैन भन्दै तपाइ दिनमा धेरै सुत्ने बानि गर्नुभएको छ...
अनुहार चम्कीलो बनाउन महिला वाँ पुरुषहरुले धेरै कसरत गरेको पाईन्छ तर हामीले यो पनी सोच्नु पर्छकी हीम्रै घर वरीप...
एजेन्सी । मेवा देख्न र खानमा जति मीठो हुन्छ त्यत्तिकै गुणकारी पनि हुन्छ। विज्ञहरुका अनुसार मेवाको केवल फल मात्...
बिहानको हिडाइ शरीरको लागि निकै फाइदा जनक छ । यदी बिहानैको घुमाईमा खाली खुट्टा हरियो घाँसमा हिड्नु त्यो भन्दा प...
लसुनका यस्ता छन् फाईदाहरु पढ्नुहोस पुरा……..
लसुन एक महत्वपूर्ण घरेलु औषधि हो । प्राचीन समयदेखि नै विभिन्न भोजन तरकारीमा गरम मसलाको रुपमा लसुनको प्रयोग हुन...
कहिलेकाँही कुनै व्यक्ति वा स्थानको नाम जति सम्झिन खोजेपछि यादै आउँदैन । यस्तो धेरैजनालाई भएको हुनुपर्छ ।उमेर ब...
In: मनोरञ्जन, स्वास्थ्य
पहिलो नेपाल आइडल बन्न सफल गायक बुद्ध लामा अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनलाई मंगलबार बिहान ९ बजे काठमाडौंको थापाथलीमा रहेको नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । तीनदिनदेखि निरन्तर ज्वरो आएर सिकिस्त... Read more
यदि तपाइको दिउँसो सुत्ने बानि छ सावधान हुनुहोस् ।राती सुतेको छैन भन्दै तपाइ दिनमा धेरै सुत्ने बानि गर्नुभएको छ भन अब त्यो बन्द गर्नूहोस्।एक तथ्यका आधारमा दिउँसोको निन्द्राले स्वासप्रश्वास सम... Read more
अनुहार चम्कीलो बनाउन महिला वाँ पुरुषहरुले धेरै कसरत गरेको पाईन्छ तर हामीले यो पनी सोच्नु पर्छकी हीम्रै घर वरीपरी दैनीकरुपमा उपभोग गर्ने कतीपय समानहरु हाम्रो स्वस्थ्यको र सरीरको लागी अती उपयो... Read more
एजेन्सी । मेवा देख्न र खानमा जति मीठो हुन्छ त्यत्तिकै गुणकारी पनि हुन्छ। विज्ञहरुका अनुसार मेवाको केवल फल मात्र होइन पूरै रुख नै औषधिय गुणले युक्त हुन्छ । मेवामा भिटामिन ए अन्य फलमा भन्दा उच... Read more
बिहानको हिडाइ शरीरको लागि निकै फाइदा जनक छ । यदी बिहानैको घुमाईमा खाली खुट्टा हरियो घाँसमा हिड्नु त्यो भन्दा पनि बढी फाइदाको कुरा हो । नांगो खुट्टा घाँसमा हिड्नुको यस्तो छ फाइदा ! तनाव कम हु... Read more
लसुन एक महत्वपूर्ण घरेलु औषधि हो । प्राचीन समयदेखि नै विभिन्न भोजन तरकारीमा गरम मसलाको रुपमा लसुनको प्रयोग हुने गरेको छ । यसको खेति हाम्रो देशमा पनि हरेक ठाउँमा हुने गरेको छ । लसुनका सामान्य... Read more
कहिलेकाँही कुनै व्यक्ति वा स्थानको नाम जति सम्झिन खोजेपछि यादै आउँदैन । यस्तो धेरैजनालाई भएको हुनुपर्छ ।उमेर बढेसँगै मानिसहरुको स्मरण शक्ति क्षीण हुँदै जाने बताइन्छ । यस्तो साँच्चै हुन्छ पनि... Read more
राम्रो निद्रा बनाउने यस्ता छन् पाँच उपायहरु पढ्नुहोस पुरा….
मानिस स्वस्थ हुनका लागि पर्याप्त निद्रा आवश्यक पर्छ। चिकित्सकका अनुसार दैनिक ७–८ घन्टा सुत्नु आवश्यक हुन्छ। यद्यपि मानिसको व्यक्तित्व र आनीबानी अनुसार सुत्ने अवधि फरक हुन्छ। लामो समयसम्म शरी... Read more
यी हुन् महका २१ फाइदा, जुन थाहाँ पाउनुभयो अचम्म पर्नुहुन्छ………
काठमाडौं।महमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन बी र सी, आइरन, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, पोटासियम, फस्फोरस, सोडियमजस्ता तत्व पाइन्छन्, जुन शरीरका लागि ज्यादै लाभदायक हुन्छन् । – महमा ग्लुकोज... Read more
किन आउँछ बढी पसिना ? पढ्नुहोस पुरा……
गर्मी मौसममा पसिना आउनु स्वभाविक हो र यो स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पनि मानिन्छ । तर बढी पसिना आउने मानिसलाई डिहाइड्रेसन या नुनको कमी हुने जस्ता समस्या निम्तन सक्छ । धेरै पसिना आउनु कुनै स्वास्... Read more